ATN: စွန်းထင်းမှု (၁)
ဘာကြောင့်ရယ် မသိ ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ တစ်မျိုး ခံစားရတယ် ဦးလေးကြီးရေ..
စိတ်ထွပ်ပေါက်ကဗျာလေးကို သေသေချာချာ ဖတ်သွားတယ်
နှင်းတောထဲက တိုးထွက်လာတဲ့ နေသုံးစင်းက
အမှောင်ထဲမှာ ထိုင်နေရတာထက်စာရင် အလင်းရောင်လေး ရသေးတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါ အကိုရယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ဒါဏ်ရာပရပွ စွန်းထင်းရာ ပရပွနဲ့
This is life. We have to face it.
Remember, we are able because we are man. Every thing will be Okay..
ဘာမှ မပြောတတ်ဘူး။ ဟိဟိ
ပန်းချီ ဆွဲနေတဲ့ ပန်းချီဆရာ တယောက်ရဲ့ အင်္ကျီအဖြူပေါ်မှာ မတော်တဆ လာရောက် စွန်းထင်းသွား တတ်တဲ့ ဆေးစက် ကလေးတွေ.. ကို ပန်းချီဆရာတွေကတော့ ချစ်တတ်တာပဲဗျ.. ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ အတွေးတွေကို ကဗျာအဖြစ်ပြောင်းချစ်သလိုပဲပေါ့..း)
ဘာမှ မပူ နဲ့ ညီလေး
စွန်းထင်းမှု (၁၀၀) ပြည့်အောင်ရေး
အဲဒီ bloody "နေလုံးကြီး" ကို မုန်းတယ်ဆိုတာ
စွန်းထင်းမှု ကဗျာလေး တွေ အားလုံး ကောင်းတယ်
နေ.. ဒီကဗျာ ကတော့
ည မှာရော ပဲ နေသာစေချင်ရင်တော့
ခက်ကုန်တော့မှာ ပဲ ကဗျာဆရာ ရေ
ဘယ်သူ့ကို မှ မမုန်းစေ လိုပါ